UMASIPALA WASEMTUBATUBA NEZIMVUME KWABASEMGWAQENI – Sivubela intuthuko Newspaper
UMASIPALA WASEMTUBATUBA NEZIMVUME KWABASEMGWAQENI
Caption: Abadayisi basengwaqeni beshaye ujenga beya kwamasipala uMtubatuba ukuthola izimvume zokudayisa
UMASIPALA waseMtubatuba enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal oholwa ukhansela uVelangenkosi Gumede ubuyise abasebenzi abesebenikwe ikhefu ukuzosiza abadayisa emgwaqeni ngezimvume .
Lokhu kuza emva kokuba UNgqongqoshe wezindaba zoMdabu kuleli uNkosazane Dlamini Zuma ememezele ukuthi bangaqhubeka nokudayisa labo abadayisa emgwaqeni kodwa bathole izimvume komasipala.
IMeya yakulomasipala uGumede uthe benze konke okusemandleni ukuze kusizakale umphakathi. “Ngifisa ukusho ukuthi senze konke ukuze labantu basizakale ngalesikhathi esibucayi esibhekene naso. Siyakuqonda ukuthi nabo bayadinga ukuthi babeke okuthile etafuleni,” Kusho Gumede .
Emva kokuba umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa amemezela iLockdown yezinsuku ezingama-21 kume nse yonke into kuleli ukuzama nokulwisana nokubhebhetheka kwegciwane iCovid-19 kuphoqeleke ukuthi nabadayisi bamiswe nokuyinto ebuye yashintshwa uhulumeni.
Lo masipala nakuba ubusiza abadayisi kodwa wenze konke ukuqikelela ukuthi awuyiphuli imiyalelo ebekiwe uhulumeni ukuzama nokulwisana nokubhebhetheka kwegciwane iCovid-19.
“Njengoba kuqhubeka loluhlelo senza konke okumele sikwenze njengokuthi abantu bangasondelani, ukufutha izibulalimagciwane. Siwumasipala siphinde sabanohlelo lapho singabokuqala eMkhanyakude ukufutha zonke izindawo zethu zomphakathi okuhlanganisa izitolo Kanye namarenki, ukulwisana nokusabalala kwaleli gciwane,” kusho uGumede.
Abanye babadayisi abebesemgqeni omude wokuyofuna imvume kwamasipala baphume bemamathela. UNkk. Emelina Mthembu uthe uyajabula kakhul usezokwazi nokuqhubeka nokudayisa. “Ngizizwa ngijabule kakhul kwazise ngizoqhubeka ngidayise Kube khona engikutholayo ngikwazi nokondla abazukulu bami,” .
IMeya yakulomasipala iphinde yakhala kakhulu ngokuxegiswa kwemigomo nokuyinto eyenziwa ongqongqoshe beminyango eyahlukene.
“Siyakhala kakhulu ngokuxegiswa kwemigomo eminye yeminyango ekubeni sisesimeni esibucayi sokuzama nokulwisana naleli gciwane. Uma ubheka abadayisi bazodayisela bani ngoba Abantu kuthiwe abahlale ezindlini.” Kuphetha uGumede.
Lo masipala unxuse umphakathi ukuba imiyalelo uhlale ezindlini njengomuyalelo kamengameli wezwe uCyril Ramaphosa
KUKHALWA NGOMASIPALA WASEMLALAZI KWABAHLUPHEKAYO